KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Baoule Bassa (Cameroon) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Belize Kriol Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Changana (Mozambique) Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chol Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Dangme Danish Drehu Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Icelandic Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabiye Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kenyan Sign Language Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kongo Korean Korean Sign Language Krio Kwangali Kwanyama Laotian Latvian Lingala Lithuanian Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Macua Madagascar Sign Language Malagasy Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Maya Mexican Sign Language Moore Mozambican Sign Language Myanmar Ndau Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Papiamento (Curaçao) Paraguayan Sign Language Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Ponapean Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Quechua (Cuzco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sateré-Mawé Sena Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tiv Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tshwa Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Wallisian Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zapotec (Isthmus) Zimbabwe Sign Language Zulu
Tesalonikafo Nhoma a Edi Kan 2:1-20
Ɔsom adwuma a Paul yɛe wɔ Tesalonika (1-12)
Tesalonikafo gyee Onyankopɔn asɛm no (13-16)
Ná Paul ani agyina Tesalonikafo no; na ɔpɛ sɛ ohu wɔn (17-20)
2 Anuanom, mo ara munim paa sɛ mo nkyɛn a yɛbae no anyɛ ɔkwa.+ 2 Na sɛnea munim no, mfiase no, yehuu amane, na wotwaa yɛn adapaa wɔ Filipi.+ Nanso, yɛn Nyankopɔn ma yenyaa akokoduru de kaa Onyankopɔn asɛmpa+ no kyerɛɛ mo wɔ ɔsɔretia pii mu.* 3 Na afotu a yɛde ma no, emfi atosɛm anaa ade a ɛho ntew mu, na ennyina nnaadaa so. 4 Mmom, esiane sɛ Onyankopɔn agye yɛn atom sɛ yɛfata sɛ ɔde asɛmpa no hyɛ yɛn nsa nti, yɛkasa a, yɛmfa nsɔ nnipa ani, na mmom yɛkasa de sɔ Onyankopɔn a ɔhwehwɛ yɛn koma mu+ no ani. 5 Nokwasɛm ne sɛ, munim sɛ yɛanka adɛfɛdɛfɛsɛm da, na yɛamfa nyansakwan so annidi mo ho da;+ Onyankopɔn ne ɔdansefo! 6 Saa ara nso na yɛnhwehwɛ nnipa anim anuonyam mfi mo hɔ anaa nkurɔfo nkyɛn. Ɛwom, esiane sɛ yɛyɛ Kristo asomafo nti, anka yebetumi de ɛka kɛse ato mo so.+ 7 Nanso, bere a yɛwɔ mo nkyɛn no, yɛyɛɛ mo brɛbrɛ sɛnea ɔbaatan korɔkorɔ ɔno ara ne mma no.* 8 Esiane sɛ na yɛpɛ mo asɛm paa nti, yɛyeree yɛn ho* kaa Onyankopɔn asɛmpa no kyerɛɛ mo. Ɛnyɛ ɛno nko, na mmom yekum yɛn ho* nso maa mo,+ efisɛ na yɛdɔ mo paa.+ 9 Anuanom, yegye di paa sɛ mokae yɛn adwumaden ne yɛn brɛ. Bere a yɛreka Onyankopɔn asɛmpa no akyerɛ mo no, yɛyɛɛ adwuma awia ne anadwo, sɛnea ɛbɛyɛ a yɛremfa ɛka kɛse nto mo mu biara so.+ 10 Mudi ho adanse, na Onyankopɔn nso di ho adanse sɛ, yɛyɛɛ anokwafo ne atreneefo ne wɔn a wɔn ho nni asɛm maa mo a moyɛ gyidifo no. 11 Mo ara munim sɛ, yɛkɔɔ so tuu mo fo, yɛkyekyee mo werɛ, na yedii mo mu biara adanse+ sɛnea agya+ yɛ ne mma. 12 Yɛyɛɛ saa na ama moakɔ so anantew sɛnea ɛfata Onyankopɔn+ a ɔrefrɛ mo akɔ n’Ahenni+ ne n’anuonyam mu+ no. 13 Nokwarem no, ɛno nso nti na yɛda Onyankopɔn ase daa,+ efisɛ bere a mugyee Onyankopɔn asɛm a mote fii yɛn hɔ no, moannye no sɛ nnipa asɛm, na mmom mugyee no sɛnea ɛte ankasa, sɛ ɛyɛ Onyankopɔn asɛm, na ɛno nso na ɛyɛ adwuma wɔ mo a moyɛ gyidifo mu no. 14 Anuanom, musuasuaa Onyankopɔn asafo ahorow a ɛwɔ Kristo Yesu mu wɔ Yudea no, efisɛ muhuu amane wɔ mo ankasa mo manfo nsam,+ sɛnea wɔn nso rehu amane koro no ara bi wɔ Yudafo nsam no. 15 Saa Yudafo yi na wokum Awurade Yesu+ mpo ne adiyifo no, na wɔtan yɛn ani.+ Afei nso, wɔnsɔ Onyankopɔn ani, na nea wɔyɛ no mmoa onipa biara, 16 efisɛ wɔyɛ sɛ wobesiw yɛn kwan sɛnea ɛbɛyɛ a yɛrenkasa nkyerɛ amanaman mufo no mma wonnye wɔn nkwa.+ Bere a wɔreyɛ saa nyinaa, na wɔn bɔne redɔɔso. Na afei de, n’abufuw aba wɔn so.+ 17 Nanso anuanom, bere a yɛne mo ntam tetew bere tiaa bi (ɔhonam mu, ɛnyɛ yɛn koma mu) no, esiane sɛ na yɛn ani agyina mo paa nti, yɛbɔɔ yɛn ho mmɔden biara sɛ yebehu mo anim. 18 Ɛno nti, na yɛpɛ sɛ yɛba mo nkyɛn. Me Paul mpo de, mebɔɔ me ho mmɔden pɛnkoro ne ne mprenu so sɛ anka mɛba, nanso Satan siw yɛn kwan. 19 Na dɛn ne yɛn anidaso anaa yɛn anigye anaa yɛn abotiri a yɛde bɛhoahoa yɛn ho wɔ yɛn Awurade Yesu anim wɔ ne mmae mu? Ɛnyɛ mo?+ 20 Nokwasɛm ni, mone yɛn anuonyam ne yɛn anigye.
^ Ebetumi nso akyerɛ, “ɔbrɛ pii mu.”
^ Anaa “sɛnea ɔbaatan ani ku ɔno ara ne mma ho no.”
^ Nt., “yɛn ani gyee ho.”
^ Anaa “yɛde yɛn ankasa kra.”